Join 2.3 သည် local file sharing နှင့်အတူလာသည် Androidsis
Join သည် Tasker ဖန်တီးသူများထံမှဖိုင်လွှဲပြောင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့် သူကငါတို့နှင့်အတူ4နှစ်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းတို့သည်ဗားရှင်း ၂.၃ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ WiFi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမှဖိုင်များကို beta တွင်ကူးယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအခြားအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည် Windows ရှိ context menu မှအနှစ်သက်ဆုံး command များ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုကူးယူပြီးချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ယူသွားရန်။
1 ဖိုင်များကို Tasker မှလွှဲပြောင်းရန် app တစ်ခု
2 Join function အသစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
3 အကြိုက်ဆုံး "Right Click" Command များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
ဖိုင်များကို Tasker မှလွှဲပြောင်းရန် app တစ်ခု
Join4လွန်ခဲ့သော XNUMX နှစ်က Tasker ယောက်ျားများကစတင်မိတ်ဆက် app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပစ္စည်းနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးပြီးအသိပေးချက်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ clipboard၊ တည်နေရာနှင့်အခြားအရာများအကြားလုပ်ဆောင်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
Join ကိုယနေ့ထိစက်ပစ္စည်းများအကြားဖိုင်များကူးသန်းသွားခွင့်ပြုနေစဉ်, ထိုသို့ပြု၏ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Google Drive သို့လွှဲအပ်ခြင်း။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကဒီအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပြီးလွှဲပြောင်းမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ချင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးထွက်မယ့် beta version 2.3 ပဲ ဒေသခံဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပါတယ် အဲဒါကိုပြောင်းဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် fiber optics ရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ အကန့်အသတ်ရှိသော connection နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများဆုံး bandwidth ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Join function အသစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
သငျသညျအကောင့်ထဲသို့အရာများစွာကိုယူရန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအကြားလွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်လိုပါက Join ၏ beta version 2.3 ကိုသာ install လုပ်ရန်လိုအပ်သည် PC နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအကြားဤလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပါအကယ် chrome extension တစ်ခုလိုအပ်တယ် ကက။ ဟုတ်တယ်၊ နောက်ထပ်အဟန့်အတားတစ်ခု၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှ သူတို့ချိတ်ဆက်ထားရန်ရှိသည်သောဒေသခံဆက်သွယ်မှုကိုသုံးပါ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Join beta ကိုတပ်ဆင်ရမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်လွှဲပြောင်းလိုပါကဤအရာကို install လုပ်မည် ခရုမ်း extension ကို.
Android ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှထိုအရာသည်လွယ်ကူသည် share menu ကိုသုံးပါနှင့် device ကိုရွေးချယ်ပါ ဖိုင်ကိုပို့ချင်တယ် သငျသညျကိုရှာဖွေနိုင်အောင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ကိုအတူတူ Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC မှဖိုင်ကိုယူပြီး Join သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။ ဆက်သွယ်မှုသည်တက်ကြွပြီးလွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်သောအခါ၊ အရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ထိုသို့ထွက်သယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
Join beta တွင်ပါဝင်နိုင်သည်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုအသစ်သုံး settings ကိုသုံးပါ: လုပ်ဆောင်ချက်ကို enable နှင့် disable လုပ်ရန်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆိုသင်၏ local network ပေါ်ရှိ authentication ကိုမလိုပဲ access လုပ်ခွင့်ပြုပါ။ Join's remot file browser ကိုဖွင့်ပြီး local network ရှိမည်သည့် browser မှမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုကြည့်ရှုရန်။
အကြိုက်ဆုံး "Right Click" Command များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဤအင်္ဂါရပ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်၊ အလုပ်သမားချွေတာခြင်းများကိုဖွင့်နိုင်သည်.
အပေါ်ကစာပိုဒ်အနည်းငယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Chrome extension ကနေကျွန်တော်တို့မှာ right click mouse command command ရှိတယ်။ ဒီ option ကကျွန်တော်တို့ကိုသောအရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် Command များကို windows popup menu တွင်သင်ကြားပေးလိမ့်မည် Chrome browser ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ right-click လုပ်သည့်အခါ။
Browser တွင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရွေးသောအခါ call command ကိုအသုံးပြုပါက Call command ကိုအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Windows context menu တွင်ပေါ်လာမည်။ အဘယ်အရာကိုအောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ် PC မှမိုဘိုင်းသို့သင်တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည် အသုံးပြုတဲ့အခါ။
una Join ရရှိသောအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းစီးရီး အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာရန်တောင်ပံများကိုပေးလိမ့်မည်။ Tasker ဖန်တီးသူများထံမှဤအက်ပ်ကိုကြိုးစားရန်သင့်မှာအခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအခိုက်အတန့်လေးကိုလွတ်ပြီးခဏပေးပါ။
joaoapps အားဖြင့် Join
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Join ယခုသင်သည်ဒေသအလိုက်ဖိုင်များကိုကူးပြောင်းနိုင်ပြီး Right Click နှိပ်၍ နှစ်သက်သော Command များကိုသုံးနိုင်သည်
New Xiaomi Mi 10 Youth Edition ကိုအသေးစိတ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ထားခြင်း - ၎င်းသည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူဖြစ်မည်လော။ [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]